Aad jeclaan lahayd App si ay ula socdaan farriimaha qoraalka On Phone kale ?
App si ay ula socdaan farriimaha qoraalka On Phone kale
Haddii, sida badan waxaa, aad qabto shaki dhuumalaysi ah in ninkaaga noqon kartaa ilaa lahayn wanaagsan iyo waxaa laga yaabaa in ku dhawaad ​​ciyaaro, laga yaabaa in aad xiisaynayso oo og sida aad u soo basaasaan karaa on farriimaha uu text?
Waa arrin inta badan iska cad in ninkaaga qish ah in la isticmaalaya lahaa isaga oo telefanka gacanta inaad la xiriirto dhinaca kale, haddii by wicitaan telefoon si toos ah iyaga ula, inta badan ama ma, by diraya fariin qoraaleed in ay u maleeyaan yihiin hab nabad leh oo isgaadhsiin, waayo, waxaa dhakhso leh tirtiri karaa laga bilaabo taariikhda telefoonka gacanta ee uu. Isla mar ahaantaana, fariimaha qoraalka ah ee imaanayey ka lover qarsoodi ah ayaa sidoo kale lagu dhakhso leh tirtiri karaa ka dib marka reading, sidaas xitaa qabsaday, helitaanka ee uu phone ma in lagugu siiyo warbixin kasta oo adkeyneysa oo ku saabsan dhaqanka uu qish.
Warka wanaagsani waa, sabab u tahay horumarka tignoolojiyada in barnaamijyada gacanta iyo Dalka Chine, hadda jira hab ah in aad la socon kara fariimaha qoraalka ah ninkaaga - iyo xataa in ay dhagaystaan ​​yeedhin, haddii aad rabto inaad tagto in ilaa hadda.
Sida loo kormeerayo, Qoraaladda uu
Taas oo uu sheegay in, badeecada isu maalmahan ay yihiin kuwo aad isku halayn karo oo la yimaadaan noocyo kala duwan oo hawlaha iyo codsiyada. Marka laga soo dejisan si phone bartilmaameedka, aad noqon doonaa aad u hesho macluumaad u diray inay server ah mid xasiloon online halkaasi oo aad ka wada ceshano karaa markasta oo aad rabto iyo xawaaro aad adigu awoodi. Iyo inaad taas samayn karaa meel kasta oo dunida la adeegsanayo wax kasta oo internet-diyaar u qalab in waa inaad gacanta - oo ay ku jiraan aad telefoon u gaar ah mobile.
The oo wax kasta oo aad la socon kara way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran inta aad doonayso inaad ku bixiso. Marka ay dhamaato hoose, xirmo aasaasi ah oo aad siin lahayd awood u leh inay basaasaan on fariimaha qoraalka, eeg taariikhda telefoonka ku jira ee (tan waxa ka mid time, duration iyo tirada loo yaqaan ama wacaya - iyo magaca xiriir haddii tirada ugu xiran yahay magaca ah ee telefoonka ee buugga cinwaan). Waxa kale oo aad arki kartaa emailka, IMS iyo noocyada kale ee chat in la sameeyaa online, taariikhda aad internetka ka view, eeg wixii sawiro ama sawirro cid diray oo u heshay in ay taleefanka gacanta. Tani waa dhan walax quruxsan awood. Just awoodda ay u akhriyaan farriimaha qoraalka ee dowllada gudoohood oo dhan (xitaa haddii ay ahaan tirtiray) waxay noqon kartaa oo dhan waxaad u baahan tahay in aad ogaatid dhab waxa uu kor u qaaddo si ay.
App kale oo ka timaada xirmo aasaasiga ah waa kartida si ay ula socdaan halka telefoonka ee (oo sidaas daraaddeed halka uu) via laga daadiyo Google. Ma jirto sabab dheeraad ah si la yaabi dhab halkaas oo uu yahay marka uu leeyahay uu soo baxay ciyaaraha loo yaqaanno golf ama sida la filayo la shaqeeyo waqti dambe. Haddii app mapping ayaa muujinaya telefoonka meel kale, aad ugu dhakhsaha badan u ogaato waxa ku saabsan!
Sidoo kale, haddii uu qaadanaysay wicitaanada in uu isagoo qarsoodi ah oo ku saabsan, xataa aad yeelan kartaa awoodda si ay u qoraan wacay - ama xitaa in ay dhagaystaan ​​ee ku nool - haddii aad dayac-tiraysa u baakadaha Premium wax yar ka qaalisan. Tani runtii waa walax yaab in Indhaha Private dhawr sano ka hor wuxuu siin lahaa hubka ay xaq loogu talagalay - iyo hadda aad u hesho in ay kla jaajuusnimo this leh, anagana waxa kaliya dhowr iyo dhawr macsarooyinka laga of badhan.
Sidoo kale ah codsiyada kala duwan ee la heli karo ka dooran karto, waxa kale oo aad dooran kartaa for lengths kala duwan ee wakhtigaas aad doonayso inaad isticmaasho app for. Software waa u awood badan in folks badan maareeyo si aad u ogaato waxa ay u baahan yihiin in ay si dhakhso ah u ogaadaan. Sababtan saarayaasha ayaa la siiyaa fursad ay si uun lagu bixiyo 1 bil isticmaalka - iyo tan shaqayn kartaa in ay ahaadaan kuwo aad u qaali ahayn, intii adigoo ku bixiso-xigxiga iyo laba macmiil ama qiimaha lacagta caymiska ah ee loo isticmaalo ay dabada ka mid ah sheyga. Sidoo kale fursadaha lacag bixinta kala duwan ee codsiyada iyo waqti-lengths, aad ku nasan karto hubo in nidaamka lacag bixinta waxaa lagu kala duwanaayeen eego siyaabo in ay bixiso iyo dalka waa mid Discrete.
Qaybta kale oo dhan ee waa in aad u ogaato oo ku saabsan waa in hal mar lagu rakibay on phone bartilmaameedka, software ah in aanu dhamaan la socodka this kuu yahay gebi ahaanba la arki karin si user ah. Isagu ma uu ogaan doontaa in waxa ka jira iyo yeelan doonaa oo aan sii ogayn in aad haddeer haysatidna daaqad si qarsoodi ah isaga oo dunida in daaha ka qish jidadkiisa oo dhammu yihiin in aad.
Sidee i orodada karo fariimaha qoraalka telefoonka kale oo lacag la'aan ah
– Basaaso fariimaha qoraalka ah ee Android Google & iphone
– Spy on iMessages u Iphone
– Gurmad File in CSV / Web-page dood farriimo koodh / PDF sms spy
App si ay ula socdaan farriimaha qoraalka On Phone kale iyo exactspy badan oo hawlaha:
Waxaad Download karaa: Aad jeclaan lahayd App si ay ula socdaan farriimaha qoraalka On Phone kale ?
App to read text messages on another phone, App to receive text messages from another phone, App to receive text messages from another phone iphone, App to see text messages on another phone, App si ay ula socdaan fariimaha qoraalka telefoonka kale, Sidee i orodada karo fariimaha qoraalka telefoonka kale oo lacag la'aan ah
→ Aad jeclaan lahayd App in lagu jaajuuso farriimaha qoraalka ah Xaaska ?